Abaqondisi bezezimali Uhla lwe-imeyili | Email Executive | Database lakamuva Lokuposa
Abaqondisi bezezimali Uhla lwe-imeyili
Database lakamuva Lokuposa » Abaqondisi bezezimali Uhla lwe-imeyili
Ikheli le-imeyili Abaqondisi bezezimali
Uhlu lwe-imeyili yabaqondisi bezezimali luzokusiza ukuthi ufinyelele kubaqondisi bezimali nomuntu wezimenenja e-USA. Ungabathumela noma yikuphi ukunikezwa okuvela enkampanini yakho. Uhlu lwe-imeyili yabaqondisi bezezimali ikhophi elihlukile kuwe. Ikhophi eyodwa yamaklayenti elilodwa ngakho-ke sonke isikhathi uzothola lapha uhlu lwe-imeyili yabaqondisi bezezimali database ehlukile. Idatha eyi-90% enembile ngoba konke kungene ngemvume futhi kuhlu oluyisisekelo lwemvume.
Uhlu lwe-imeyili yabaqondisi bezezimali luqukethe kuphela abaqondisi bezimali abasebenzayo nemininingwane yokuxhumana yemenenja. Ungase futhi wenze ngezifiso uhlu lwakho lwe-imeyili yabaqondisi bezezimali oluvela ezweni lakho elithile. Uzothola lapha yonke imininingo egciniwe yama-imeyili futhi konke irekhodi kuqinisekisiwe. sinemininingwane engaphezu kwe-143,379 kusuka kubaqondisi bezimali kanye nemenenja. Phezu kwakho konke i-imeyili yabaqondisi bezezimali ibala imininingwane.
Uhlu lwe-imeyili yabaqondisi bezezimali luqukethe kuphela umqondisi wezemali osebenzayo nemininingwane yemenenja. Irekhodi elilodwa elivela enkampanini eyodwa ngakho akukho okuphindaphindwayo kusuka enkampanini eyodwa. Ekugcineni lolu uhlu oluphelele oluvela ezinkampanini zase-USA. Uma futhi ufuna ukuthola imininingwane enkudlwana evela kulesi sihloko somsebenzi ungaxhumana nathi. Uma ufuna ukuthola imininingwane ethe xaxa evela e-USA ngaphansi kwalabaqondisi bezezimali nomuntu ongumphathi bese wenza i-oda yangokwezifiso lapha. Futhi sikusiza ekwakheni uhlu lwamanye amazwe avela kuleli zinga lomsebenzi.
Thenga Izinhlu Ze-imeyili Zabaqondisi Abasha Bezezimali nabavuselelwe
Inani lamarekhodi: 143,379
Izindleko Eziphelele: $ 3,222
Abaqondisi bezezimali Ama-imeyili Uhlu Lombuzo Nempendulo